SAWIRO: Ciyaartoyda Real Madrid oo waqti la qaadanaya asxaabta & qoysaskooda ka hor final-ka Champions League. - Hablaha Media Network
SAWIRO: Ciyaartoyda Real Madrid oo waqti la qaadanaya asxaabta & qoysaskooda ka hor final-ka Champions League.
HMN:- Tababare Zinedine Zidane ayaa fasax dhawr maalmood ah siiyay ciyaartoydiisa ka hor inta aysan dib ugu soo laaban xerada tababarka kooxda si ay isugu diyaariyaan final-ka Champions League oo ay la ciyaari doonaan Juventus.
Sadex ka mid ah ciyaartoyda ayaa hal meel fasax ku qaatay waana Keylor Navas, Sergio Ramos iyo Lucas Vazqeuz kuwaas oo sawiro soo dhigay barahooda bulshada.
Weeraryahanka reer Portugal wuxuu soo bandhigay awoodiisa murqaha isagoo ku sugan goob aan magaceeda la sheegin, halka James Rodriguez qudhiisa uu si kalinimo ah u dalxiisay.
Dhanka kale Mateo Kovacic ayaa saaxiibadiis waqti lasoo qaatay, halka Danilo iyo Marcelo ay iyaguna waqtigooda ku bixiyee iney kubad la ciyaaraan asxaabtooda madama ay yahiin ciyaartoy reer Brazil ah.